'Hapana Show' Chipo Chemuchato - Best Mazano | Bezzia
Chipo chemuchato 'hapana kupinda': Mazano akanakisa
Susana godoy | 16/06/2022 16:00 | Muchato
Kana iwe uri kufunga kupa 'hapana show' chipo chemuchato nekuti haungakwanise kuenda, saka tinokusiya uine akatevedzana mazano akakwana.. Kana iyo pachayo dzimwe nguva inenge iine musoro wekufunga kuti chii chatinofanira kupa kana tikaenda kumuchato, pane zvinopesana, zvinotiunzawo nyika yekusahadzika. Chokwadi isu takasarudza sarudzo yakakwana.
Zvese zvinoenderana nekuti iwe unoziva zvakawanda kana zvishoma nezve zvinoravira vaviri. Nekuti inogara iri zano rakanaka kupfura nzira yakadaro. Asi kana zvikasaitika kwauri, usanetseka nekuti pane mazano ekusarudza kubva. Chii chandinofanira kupa kana ndikasaenda kumuchato? Ndiwo umwe wemibvunzo inonyanya kunzwiwa uye nhasi uchave nemhinduro dzakasiyana kwairi.
1 Chipo chemuchato 'hapana kupinda': bhokisi rezviitiko
2 Bhadhara zvimwe zvezvako zvakakosha
3 A personalized pack yemabhodhoro
4 Kushamisika kwekudya kwemangwanani kumba
Chipo chemuchato 'hapana kupinda': bhokisi rezviitiko
Chokwadi unotoziva iwo mabhokisi anofanana nekurasika mune yakasarudzika chiitiko. Kune rumwe rutivi, kune avo kwaunogona kusarudza husiku kana huviri, pamwe nekudya kwemangwanani kana kunyange hafu yebhodhi. Mukuwedzera, nzvimbo dzekuenda dzinogona kunge dzakasiyana-siyana uye panguva ino zvichava kune vakaroorana kuti vasarudze kupi. Pamusoro pehusiku hwemahotera, kune zvakare zviitiko zve spa, nekurapa kunosanganisirwa kana kugona kuravidza nhevedzano yezvikafu uye kunyangwe kushanya kwakasiyana-siyana. Kune pfungwa dzisingaperi, saka iwe unofanirwa kusarudza imwe inokodzera zvishoma kune zvinonaka zvemwenga nechikomba. Kuti uite chiyero maererano nemari yauchazoisa mari, funga nezvehafu yaungapa kana ukaenda kumuchato. Ndiko kukupa zano!
Bhadhara zvimwe zvezvako zvakakosha
Kana ushamwari hwava chinhu chakanaka kwauri, unogara uchida kuti vakuyeuke pazuva iroro rinokosha. Ndosaka, iwe unogona kubhadhara hafu yezvimwe zvezvinhu izvo mwenga kana chikomba vanofanira kutenga. Somuenzaniso, mibatanidzwa, bouquet kana zvinhu zvakafanana. Inzira yekudyara mari yawaizovapa kana kuti pamwe waizotenga imwe dhata yavasingade zvakanyanya. Kunyange zvazvo zvingava zvinokosha kwatiri, chokwadi nokutaura vachakwanisa kuzvinzwisisa.
A personalized pack yemabhodhoro
Chokwadi icho mushure memuchato, uye kana vangosvika kubva kuhoneymoon, vanokukoka iwe kumba kuti urangarire zuva guru.. Saka, hapana chinhu chiri nani pane kuvapa yakasarudzika paki yewaini kana cava. Kune avo vanounzawo zvinwiwa zvakati wandei uye hongu inogona kunge iri ruzivo rwakakwana. Kunyange magirazi aya anogona kunyorwa uye chinamatira chakanaka chine mufananidzo wemuchato chinogona kuiswa pamabhodhoro. Nhasi kune akawanda mawebhusaiti anozvitarisira. Saka kuburikidza nemapurogiramu akareruka unogona kuzviita pasina matambudziko makuru.
Kushamisika kwekudya kwemangwanani kumba
Zvichida hachisi chipo chakadaro, asi chishamiso chakanaka. Nemamwe manzwi, kana tichitaura nezve 'kusauya' chipo chemuchato, chinogona kupihwa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana. Dzimwe nguva nekuti hatikwanise kuenda nekuda kwekumwe kuzvipira, mune zvimwe zvakawanda nekuda kwenyaya dzehupfumi. Saka, munhu wese anofanirwa kugadzirisa kune yavo bhajeti. Saka vashamise nekuhaya imwe yekudya kwemangwanani kwavanoenda kumba vasingazive vaviri vacho, chiito chakanaka chinoita kuti vafare..
Pakupedzisira, tinogona kuwira mumazano echinyakare, asi hatifaniri kuvasiya parutivi nokuda kwaizvozvo. Pasinei nokuti uri kushongedza imba yako kana kwete, tsanangudzo yekushongedza inogona kugara iri sarudzo yakanaka. Imwe kupenda kana wachi yemadziro, pamwe chete nemwenje madiki zvematafura eparutivi pemubhedha. Iyo jasi racks yenzvimbo yekupinda zvakare yakakosha sarudzo uye hongu, matireyi kuitira kuti vatore kudya kwemangwanani kunorara. Chii chaunowanzopa kana usingaendi kumuchato?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Lifestyle » Muchato » Chipo chemuchato 'hapana kupinda': Mazano akanakisa
Nzvimbo yemunhu muhukama hwerudo
Mazano ekubatanidza fenicha yekare neyemazuva ano